Feno 10 taona ny Clam… : asa maharitra ny fampivoarana ny kalitaon’ny sakafo | NewsMada
Feno 10 taona ny Clam… : asa maharitra ny fampivoarana ny kalitaon’ny sakafo
“Sakafo madio sy ara-pahasalamana, antoky ny fampandrosoana”. Lohahevitra iompanan’ny hetiska ho fankalazana ny faha-10 taona nijoroan’ny “Consortium des laboratoires agroalimentaires” (Clam), na ny fivondroan’ireo laboratoara misahana ny sakafo, miankina na tsia amin’ny fanjakana, eto Madagasikara io. Homarihina etsy amin’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo, etsy Analakely, izany mandritra ny hateloana, ny 9 hatramin’ny 11 novambra izao.
“Ankoatra ny fampahafantarana ny Clam sy ireo laboratoara rehetra mpikambana ao, hisy koa ny fanentanana fampianarana, vela-kevitra isan-karazany ary fampirantiana mandritra ny hetsika. Mikasika ny fampivoarana ny kalitan’ny sakafo sy ny vokatra ara-pambolena, fiompiana ary jono ny fanentanana izay hatao, satria asa maharitra iandraiketanay izany”, hoy ny nambaran-dRakotondravony Francis, filohan’ny Clam.
Efa nisy ny hetsika natao nialoha izany. Nampiofana sy nanoro ny tokony hatao ireo mpivarotra sakafo eny amoron-dalana, eto amin’ny boriborintany enina eto Antananarivo Renivohitra izany. Tanjona ny hanatsarana ny fahafantaran’ny mpivarotra sakafo amoron-dalana ny fahadiovana sy ny fitandroana ny fahasalamana, ny fanatsarana ny fepetra fikarakarana ny sakafo sy ny fivarotana azy ary ny fanentanana ireo mpivarotra amin’ny lalàna mifehy ny varotra sakafo amoron-dalana.
Anisan’ireo mpikambana ao amin’ny Clam ny orinasa Star ary nandray anjara hatrany tamin’ny hetsika rehetra natao hatramin’izay. Anisan’izany ny fanohanana ny fiofanana ho an’ireo laboaratoara mpikambana, mba samy hahazo ny fenitra Iso 17 025. Mbola ansian’ireo mpanohana ny hetsika faha-10 taona ihany koa ny Star amin’ity. “”Manana laboratoara tsirairay avy ireo ozinina famokaran’ny Star, mba hanarahana ny kalitaon’ny vokatra, izay takian’ny famokarana”, hoy ny fanazavana nomen-dRalijerson Béatrice, tale misahana ny kalitao eo anivon’ny vondron’orinasa Star.